Kenya oo soo bandhigtay warbixintii u dambeysay ee Coronavirus - Awdinle Online
Kenya oo soo bandhigtay warbixintii u dambeysay ee Coronavirus
Ismaamulka Mandheera waxaa ka caafimaaday Covid-19 dad gaaraya 17-ruux oo kadib markii muddo lagu daweynayay isbitaal loo gooni yeelay in la dhigo shaqsiyaadka laga helo cudurka Coronavirus.
Madaxa Caafimaadka Mandheera Maxamuud Aadan maxamed ayaa sheegtay in 6-ruux oo kamid ah 17-kaas qof loo fasaxay in ay dib ugu laabtaan Guryahooda, halka 11-kale lagu haynayo xarun gaar ah oo muddo kooban kadib baaris kale la marinayo laguna xaqiijinayo go’aanka ugu dambeeyo.
Shakiga dadkaan ayaa yimid kadib markii la tuhmay in ay suuragal tahay in jirkooda wali xannuunka si dadban ugu jiro, arrintaas waxa ay dhalisay in laga soo wareejiyo xarunta karaantiilka lana geeyo meel gaar ah oo lagula soconayo xaaladahooda.
Maxamed ayaa yiri “Waxa aan xiligaan ku jirnaa feejignaan dhanka Xuduudda ah, dadka ayaa isaga kala gudbaya Soomaaliya iyo Mandheera, taasina waxa ay nagu dhalisay cabsi weyn oo ah in aan ka guuleyso cudurka”.
Xarunta Caafimaadka Kenya ee u xilsaaran la dagaalanka Cudurka Coronavirus ayaa dabagal ku heysa ismaamulada si ay ula socdaan dhaq-dhaqaaqyada dadka laga helay fayruska iyo kuwa ka bogsaday ee lasii daynayo.
“Waxa aan sugeynaa in ay xaaladdu soo hagaagto, kaliya waa aynu sugnaa isbadalka caafimaadka ee muuqda, war wanaagsan ayaan idinla wadaagi doonaa kolka aan gaarno hamiga aynu leenahay“ Sidaasi waxaa yiri Madaxa Caafimaadka Mandheera.
Cali Ibraahim Rooba oo ah Guddoomiyaha Ismaamulka Mandheera waxa uu dhankiisa sheegay in horumar laga gaaray la dagaalanka Cudurka, marka la eego heerka uu ku socdo faafistiisa oo hoos u dhacay.
Balse walwalka ugu weyn waxa uu sheegay in ay yihiin Soohdinta ay la wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya oo kiisas cudurka ah laga diiwaangeliyay taasina ay halisteeda leedahay sida uu hadalka u dhigay.
Dowladda Kenya waxa ay bandow gelisay Magaalada Nairobi, Mombasa, Kilifi iyo Kwale, sabab ka dhalatay badbaadinta dadka halkaas kunool ee ka badqaba Cudurka dilaaga ah ee Covid-19 oo kiiskii ugu horeeyay Mandheera laga helay 2-dii April, kadib markii cudurka uu qaaday Qof ka safray Kilifi, marayna Nairobi, kadibna tagay Magaaladaas.
Kenya waxaa ka diiwaangashan kiisas dhan 3,860-ruux, halka ay u dhinteen 105-qof, waxaana ka caafimaaday 1328 bukaan guud ahaan dalkaas, sidaas waxa ay kusoo gashay kaalinta 85-aad ee guud ahaan kala sareynta dalalka, halka Afrika ay kasoo tiigsatay booska 15-aad.
Isha:- Daily Nation /
Previous articleFaah faahin laga helayo Qarxyo ka dhacay G/Shabeellaha Hoose
Next articleMustaqbalka dhaw iyo kan fogba, Ciidamada Itoobiya saameyn intee la eg ayay yeelan doonaan?